Yekutanga yakatsaurwa Plasma Mobile ISO mufananidzo ikozvino wawanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Yekutanga yakatsaurwa Plasma Mobile ISO mufananidzo ikozvino wavapo
Joaquin Garcia | | Desks, Noticias
Vagadziri vePlasma Mobile chirongwa vakati 2018 raizove gore re software uye zvinoita sekunge zvakataurwa zvichazadzikiswa. Mune isingasviki mwedzi we2018, isu tatova neyekutanga yakatsaurwa Plasma Mobile ISO mufananidzo. Mufananidzo unobvumidza iwe kuisa vhezheni yeanoshanda system pane chero chaiwo muchina kana wega komputa, kunyangwe iyo yekupedzisira isingakurudzirwe.
Parizvino, kuiswa kwe Plasma Mobile sandbox yakanga yakaoma uye isingakwanise kune vashandisi vazhinji vaida kuyedza. Iye zvino, nemufananidzo uyu wakatsaurirwa, mushandisi anongofanirwa kurodha pasi uye kuvhura neiyo virtualization software kana kuirekodha zvakananga pane pendrive.
Vagadziri ve KDE Project uye Plasma Mobile vagadzira ichi ISO mufananidzo kuitira kuti vashandisi vekupedzisira vazviedze uye varatidze mabhagi anogona kuita ayo arimo. Nekudaro, kana zvangoonekwa uye zvataurwa, vanogadzira vanogona kunatsiridza iyo KDE nhare yekuparadzira uye voita kuti igadzikane kana zvichibvira.
Plasma Mobile inogona kuyedzwa mumuchina chaiwo kana pakombuta yega
Kana paine dambudziko kana bhagi rikawanikwa, mushandisi anogona kuzvitaurira kuplasma-mobile@kde.org tsamba yekutumira, kune #plasma IRC chiteshi paFreenode kana kuboka rePlasma Mobile Teregiramu. Mikana yakawanda ye kukwanisa kumhan'ara chero bug uye nekudaro nekuvandudza nharaunda ino yemafoni.
Asi kwete izvi chete. Kunyangwe iwe uchizofanira kushanda nekungwarira kukuru, iyo Dedicated ISO mufananidzo wePlasma Mobile inobvumidza kuvandudzwa kweakasarudzika maapplication ezve nharaunda kana inoenderana neiyi software iwe uchitova neiyo modhi yefoni ichave iine kugovera uku kana nharaunda nhare. Iyo Plasma Mobile iso mufananidzo unogona kutorwa kuburikidza neizvi link. Dhawunirodhi iyi yemahara saka tinogona kuirodha pasi kakawanda sezvatinoda. Saka Wadii kuyedza pakombuta yedu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Yekutanga yakatsaurwa Plasma Mobile ISO mufananidzo ikozvino wavapo
Maitiro ekunakidzwa neTwitch paGnu / Linux
Maitiro ekuisa PHP 7.2 paUbuntu neDebian